Luis Suarez ayaa aad uga calool xumaaday inuu ka tago kooxda Barcelona kadib markii shir jaraa’id… – Hagaag.com
Posted on 24 Seteembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Weeraryahankii hore ee Barcelona Luis Suarez ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id markii uu soo gabagabeynayey waayihiisii ​​Barcelona, ​​munaasabadan ayaa fursad u noqotay ciyaaryahanka inuu kaga hadlo wixii uu soo arkay todobaadyadii la soo dhaafay ka dib markii laga codsaday inuu ka tago kooxda reer Catalan.
Suárez wuu awoodi waayey inuu isciliyo bilowgii shirka waxaana ilmadiisa saameyn ku yeelatay daqiiqadii sagootinta kadib safar taariikhi ah oo uu la soo galay Barcelona, ​​mararka qaar wuu joojinayay hadalka ka hor inta uusan u dhaqaaqin ka jawaabida su’aalaha suxufiyiinta.
Wuxuu sheegay in markii uu ka helay telefoon tababaraha cusub, Ronald Koeman, uu ogaa waxa uu u sheegi doono tababaraha reer Holland, wuxuuna tilmaamay inuu ka codsaday maamulka inay u ogolaadaan inuu la tababarto kooxda ilaa iyo inta uu xal uga helayo mustaqbalkiisa.
Isagoo ka jawaabaya su’aal ahayd inuu ka qoomamooday wax uun intii uu la joogay Barcelona, ​​wuxuu yidhi, “Waan ku faraxsanahay wixii aan u qabtay kooxda waxna kama qoomameynayo, taas caksigeeda, waxaan ciyaaray marar badan anigoo dhaawac ah oo u adkaystay xanuunka.”
Isaga oo ka hadlaya xiriirka uu la leeyahay Lionel Messi, waxa uu yidhi, “Qof walba wuu garanayaa xidhiidhkayga aniga iyo Messi. Markii aan imid Barcelona, ​​qaar ka mid ah ciyaartoyda ayaa iiga digay Leo, laakiin arrimuhu si fiican ayey u socdeen. Waan ogahay waxa uu ku fikirayo isaguna wuu ogyahay waxa aan ku fikirayo. Waxa jiray warar been abuur ah oo badan bishii ugu dambaysay, laakiin Waxaan isku dayay inaan ka fogaado waxaas oo dhan. “
Suarez ayaa tilmaamay inuu helay dalabyo badan ka dib markii Koeman ku wargaliyay bixitaanka, wuxuuna xaqiijiyay inuu doortay Atlético de Madrid maxaa yeelay waa koox awood u leh inay la tartanto Barcelona iyo Real Madrid.
Wuxuu sheegay inuu la hadlay ninka ay dhalashada wadaagaan ee Godin iyo saaxiibkiis kale ee Barcelona Antoine Griezmann ka hor inta uusan go’aan ku gaarin u dhaqaaqista Atlético de Madrid, isagoo ku sifeeyay kooxda uu tababaraha u yahay Diego Simeone inay yihiin kuwo hami iyo tartan ku gelinaya.
Madaxweynaha kooxda Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa garab taagnaa Suárez intii uu ku gudajiray shirkiisa jaraa’id, waxaana sidoo kale goob joog ahaa tiro ka mid ah asxaabtiisa oo ay kamid yihiin Messi, Pique iyo Jordi Alba.